Best Software Recovery USB inay Qabtaan Recovery USB
1 Features Flash Drive
1.2 tirada drive Flash
1.3 nooc drive Flash
2 Special Flash eryi
2.1 lo flash drive
2.3 Flash dayactir drive
2.4 Read flash drive kaliya
3 Dhibaatooyinka iyo Dhibaatooyinka
3.1 Flash drive aan la aqoonsan yahay
3.2 qaab disk Flash
3.3 Barzakh flash drive
3.4 kharribeen flash drive
3.5 Ladnaansho Windows System la soo kabashada USB
Kabashada drive 4 Flash
2.1 Ladnaansho files lumay ka drive qalinka
2.2 USB flash kabashada drive
2.3 Ladnaansho flash Mac
2.4 Flash qalab kabashada drive
2.5 Ladnaansho files tirtiray ka USB flash drive
2.6 PNY jira diboomaasi lagu qalab kabashada flash drive
2.7 Adata kabashada flash drive
2.8 Lexar jumpdrive kabashada flash drive
2.9 Silicon kabashada Power flash drive
Xaaladood khasaaro xogta USB Common
Solutions u soo kabashada USB
Video tutorial soo kabashada file USB
Ma files runtii tirtiray ka USB flash drive marka ay taasi dhacdo?
Jooji isticmaalka drive USB ah ka hor dib u soo kabashada
1 USB Common xaaladood khasaaro xogta
1. qalad ah ama taxaddar la'aan tirto faylasha ka USB flash drive oo aan ka heli kartaa iyaga oo ku bin recycle ama qashinka bin.
2. Waayaya files markuu iyagii wareejinta ka USB flash drive qalabka kale sabab aan la garanayn.
3. Ha illoobin in uu kugu xidho USB flash drive ka dib markii computer hoos xiro iyo faylasha qaar ka mid ah waxaa la tirtiray.
4. USB flash drive xanuunka virus ama weerar furin iyo files heli maqan ama la tirtiro.
5. USB flash drive files noqon geli karin sababo aan la garaneyn.
2 Solutions u soo kabashada USB
Waxaa lagu talinayaa in ay qaataan USB qalab kabashada inay soo kabsadaan xogta ka USB , maadaama ay tani waa habka ugu fiican oo toos ah. Waxaa jira in badan oo qalab soo kabashada xogta USB tahay, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad hesho mid ka mid ah xaq ugu habboon baahidaada. Guud ahaan isku halaynta waa inuu noqdaa isir ugu muhiimsan, sidoo kale xawaare dib u soo kabashada, sahal-to -use, iyo qiimaha tartan kale oo jira qaar ka mid ah qodobo muhiim ah in aad ka fiirsan.
Good USB software kabashada xogta ku siin kara awoodda Falanqeynta si aad u qiimeeyo natiijada soo kabashada ka hor inta aadan iibsan.
Haddii aad isticmaalayso nidaam hawlgal Windows, waxaad heli kartaa isku day ah Wondershare Data Recovery . Waa sida Windows software kabashada USB kaa caawin kara in aad soo kabsado files ka USB lumay ay sabab u tahay la tirtiro, formatting, jeermiska fayraska, iyo sababo kale. Waxa kale oo aad samayn kartaa USB flash kabashada drive ah iyada oo gargaar ah shirkad adeegga kabashada, laakiin qiimaha ay aad u sarayso. Waxa kale oo jira version ah Mac u isticmaala Mac: Wondershare Data Recovery for Mac (la heli karo Mavericks hadda).
Download version maxkamad free hoos ku hadda.
Ku rakib oo ay maamulaan Data Recovery ku on your computer (qaadashada version Windows sida tusaale). Iyadoo qasabno wax yar uun, waxaad soo kaban karto, dhammaan xogta lumay aad ka wadid aad USB aan khasaaro tayo leh.
Tallaabada 1 Connect wadid aad USB in computer iyo abuurtaan barnaamijka on your computer.
Tallaabada 2 Dooro nooca file in aad rabto in aad soo kaban ah.
Tallaabada 3 Dooro inuu ka soo kabsado files ka USB drive (External qalabka saari karo).
Ka hor inta iskaanka, waxaad eegi kartaa "Enable Deep Scan", kaas oo kaa caawin kara si ay u qabtaan iskaanka dhamaystiran u files lumay wadid aad USB, sida laga badiyay ay sabab u tahay formatting. Dabcan, sidoo kale waxa aad ka boodi kartaa in iskaan haddii aadan u baahnayn taas, waayo, waxaa iska weydiiyo waqti ka badan for.
Talaabada 4 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan files ka wadid aad USB.
Marka fulinaya kabashada xogta, waxaad aan waxba badbaadin karin kuwa files soo kabsaday on drive ka USB isku mar. Waxaad iyaga ku badbaadin karaa qalab kale oo dibadda ah ama si toos ah badbaadin on your computer.
3 Video tutorial soo kabashada file USB
4 Ma files runtii tirtiray ka USB flash drive marka ay taasi dhacdo?
Marka aad si taxaddar la'aan la kulanto qaar ka mid ah kuwa xaaladood ee nolol maalmeedka, waxa aad weli ka werwerayn oo ku saabsan in files kuwa tirtiray ka USB flash drive joogto ah oo ma jirto si ay u soo kabtaan xogta ka USB? Sida xaqiiqadu, ka USB geesinimo files macnaheedu ma aha in files kuwan waxaa lagu weligeedba way tageen. Waxaad fursad weyn in la sameeyo dib u soo kabashada USB haddii aad doorato saxda ah soo kabashada flash drive software hana ka dhigi qalad kasta oo qalliin taas oo hoos u dhigi doontaa fursad kabashada USB.
5 Jooji isticmaalka drive USB ka hor dib u soo kabashada
Ka hor inta fulinaya USB kabashada xogta flash drive , waxa habboon in aad marka hore la sameeyo waa in la yareeyo khasaaraha xogta iyo in la kordhiyo suurtagalnimada ee soo kabashada USB guul.
In badan oo hawlaha ka dhacaya ku wadid aad USB, fursad weyn ee overwriting xogta noqon doonaa. Si kor loogu qaado fursadaha u soo kabashada xogta USB, xusuusan waayay inuu u isticmaali drive USB ah in uu kaydiyo faylasha cusub, in aan la saxaa dokumenti kasta oo lagu kaydiyaa it on, ama aanu isticmaalin drive USB wax dheeraad ah ku wareejiyo.
Sidee inuu ka soo kabsado SSD Data
Sida loo Gadzhiyev Drive A USB in kale
Terabyte tartanka flash drive - dib u eegis loogu flash poplular kaxeeya badan 1GB
In ka badan waxaad ka fekeri karaa - waxa ah flash drive USB qaban karin
Xal Best si ay u cusboonaysiiyaan aad flash drive
All u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan noocyada kala duwan ee USB Flash Drive
Read flash drive oo keliya - sida inaad ku darto ama soo saarto ilaalinta qor
Adata Flash Drive Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Adata Flash Drive
Way sahlan in la helo geeddi Cruzer Fit Flash Drive Recovery
> Resource > Flash Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka USB la Recovery USB